We need to use every tool we can to pressure the generals
ဖိအားမှန်သမျှကို သုံးဖို့ လိုပါတယ်
စက်တင်ဘာ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ
စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ဗြိတိန် လေဘာပါတီ ညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့် Burma Campaign UK မှ မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ မိန့်ခွန်း မြန်မာဘာသာပြန်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဦးရေ ၂ ဆ နီးပါး တိုးလာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကမ္ဘာကိုပြောနေတာကတော့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် တည်ဆောက်နေတာပါ တဲ့။ နိုဝင်ဘာမှာ သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကို စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်ပြီး တည်မြဲဖို့ အတွက် ပုံဖော်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတချို့ အရပ်ဝတ် လဲလိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲပါ။ ဘာမှ ကွာခြားမသွားတဲ့ အာဏာရှင် တမျိုးတည်းကို အရပ်ဝတ်နဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ကျမတို့ ထပ်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေက ဆက် ရှိနေဦးမှာပါပဲ။
မြန်မာပြည် အရှေ့ပိုင်းက တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေကို ဝင်ပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေတုန်းပါ။ စာသင်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ ရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာနဲ့ ကလေးတွေ၊ ကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေပါ မကျန် ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေအတွင်း Burma Campaign UK က လက်ခံ ရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၃၅ဝဝ ထက်မက ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေက ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာကို ဘယ်တော့မှ သူ့အလိုလို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်တဲ့၊ လူမဆန်တဲ့၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ လူသတ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဘာပါတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ လေဘာအစိုးရကို ကျမက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားချင်ပါတယ်။ လေဘာအစိုးရ (UK) ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံတဲ့ အကြောင်း ကြေညာတဲ့ ပထမဦးဆုံး အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ ဒီထက် ပိုပြီး အရှိန်ပြင်းတဲ့ တွန်းအားတွေနဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဥရောပ သမဂ္ဂက ပစ်မှတ်ထား စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ဖို့၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ဖို့ တို့အတွက် ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုကို ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိဘဲ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ထောက်ခံအားပေးမှုအတွက် လေဘာအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr Gordon Brown, နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Mr David Miliband တို့ကို အထူးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျမ ပြောကြားပါတယ် (လက်ခုပ်သံများ)။ ဒီအတွက် ကျမတို့ တကယ်ပဲ ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကိုတော့ ဒီလို မပြောနိုင်ပါဘူး။ UN အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဆီက မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားချက်တွေ မကြာခဏ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ်လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ကတိမတည်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ UN ကလည်း အခြေအနေ အပြောင်းအလဲကို “စောင့်ကြည့်ရအောင်” လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့တာပါပဲ။
သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတုန်း အမျိုးသမီးတွေ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရပြီ။
မျိုးဆက် တခုပြီးတခု ကလေးတွေက ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ၊ အကြောက်တရားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကလေးဘဝ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ UN နဲ့ တခြား အစိုးရတွေက ဒါကို လစ်လျူရှုပြီး ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘဲ နေမြဲတိုင်း နေနေကြတယ်။ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဆက်ပြီး လက်ခံနေလို့ မဖြစ်ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ဖိအား မပေးနိုင်သေးလို့ပါ။ နိုင်ငံတကာ ဖိအား ဆက်ပြီး ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်လာအောင် ဖိအားမှန်သမျှကို သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့၊ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကို ဒီလို စေ့စပ်ရေးအတွက် ဖိအားပေးဖို့ UN ဦးဆောင်တဲ့ စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ရေး အောက်မှာ ကျမတို့ ကမ္ဘာကြီး တခုလုံး ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ UN ကော်မရှင်က မြန်မာပြည်ကို သွားပြီး စစ်အုပ်စုရဲ့ လူသားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးသွားရင် ကျမအဖေတို့ကို ထောင်ထဲ သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပြီး မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အားလုံး တရားဝင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ကျမမှာ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သလောက် နီးပါး ခံစားရမိပါတယ်။ တခါတလေ ကျမအဖေကို ကျမတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမဟာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါစေ သူဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျမ သိနေတယ်။ ကျမတို့ဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အောင်ပွဲကို ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ဒီအတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ဟာ တောင်အာဖရိကကို အကူအညီပေး ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက်လည်း အကူအညီ ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(အထက်ပါ မိန့်ခွန်းကို ဘာသာပြန်သူ မငယ်နိုင်၏ ဘလော့ http://nge-naing.blogspot.com/2010/09/blog-post_6237.html တွင်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောကြားသော မူရင်း မိန့်ခွန်းကို http://www.youtube.com/watch?v=_-By1Gigf_0 တွင် ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်သည်။)
ma oo said…
မဝေနှင်းပွင့်သုန်ပြောတာတွေ မှန်ပါတယ်။ အမျိုး သားတွေ မကြိုးစားဘဲပြည်ပအား ကိုးတာမဟုတ်ရ ပါ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်သူ ဟူသမျှ အတိုက်အခံရန် သူလို့ သတ်မှတ်ခံရပြီး ဖိနှိပ်မှုတွေပြင်းထန်လွန်းနေပြီ။မဝေနှင်းပွင့်သုန်ကိုအ ရမ်းကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီး အဖေရယ်အမေရယ်၊မောင်နှမရယ်မိသားစုနေထိုင်ရ ချင်းမရှိဘဲကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ သူ့ဘဝလေးကိုဖြည့်တွေး ကြည့်မိပါတယ်၊ကျမဖေဖေလဲနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်(၂)ကြိမ်ကျခဲ့တယ်။မိသားစု စားဝတ်နေရေး ဒုက္ခ ရောက်ကြပြီး။ကျမတို့ညီအမတွေပညာရေးထိခိုက်ခဲ့ ရပါတယ်။မေမေကအစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှ ထောက်ထားစာနာမှုခံစားခွင့် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖေဖေ ထောင်ကျစဉ်က မဆလခောတ်ယခုမဝေနှင်းပွင့် သုန် ဖေဖေထောင်ကပိုဆိုးတဲ့နအဖခောတ်လေ။
UN can provide lips service. UN is toothless.
မဝေနှင်းပွင့်သုန်ရဲ့ ဖခင်နဲ့ မိသားစုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ပြောသလို ဖိအားမှန်သမျှ သုံးသင့်တယ် ဆိုတာကိုတော့ လက်မခံပါ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် ဆင်းရဲတွင်းနက်ပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရတယ် ဆိုတာ အားလုံး အသိပါ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ရောဂါထူပြောပြီး မသေသင့် ပဲ သေသွားရတဲ့ မိဘတွေ၊ မဖြစ်သင့်ပဲ ဖြစ်သွားရတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပါ။ သူတို့ တတွေဟာ ပြည်ပ အခြေစိုက် အဖွဲ့ အစည်းတွေကပေးတဲ့ အကူအညီ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရကြပါဘူး။ သူတို့ တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မဝေနှင်းပွင့်သုန်ရဲ့ အခြေအနေက သက်တောင့်သက်သာ ရှိပါတယ်။
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှုတွေကြောင့်
စစ်အစိုးရဟာ အဓိက တရားခံ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ တို့ ကို (တကယ့်လက်တွေ့ မှာ မထိရောက်တဲ့) ဖိအားတွေပေးဖို့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခခံခိုင်းထားတာ လုံးဝမတရားပါ။ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးမှု နိမ့်ကျနေရင် အစိုးရကို ဖိအားပေးပြီး ပြောင်းလဲခိုင်းလိုက်နိုင်ရင် တောင်မှ အနာဂတ်မှာ အာဏာသိမ်းမှုတွေ ထပ်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ ဖြိုးပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှ လူလတ်တန်းစား ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ထွန်း လာပြီး (People's power)လို့ ခေါ်တဲ့ ပြည်သူတွေမှာ စွမ်းအား ပိုရှိလာမယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံအတွင်းကနေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားပေးနိုင် လာမယ်။ အဲဒီတော့မှ စစ်မှန်ပြီး ကြာရှည်တည်မြဲတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖိအားပေးမှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်
အများပြည်သူကို မထိခိုက်တဲ့ ဖိအားပေးမှု မျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သဇင်ရနံ့said…
ကုလားမျိုးဆက်လေးက လဲအလာကြီးပဲ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ရခိုင်ပြည်က ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေကိုတော့ သူတို့ လိမ်သလို ရိုဟင်ဂျာ အမည်တော့ နိုင်ငံခြားဝိုင်းမလိမ်ပေးနင့် ကုလားမလေးရေ။ကုလားအချင်းချင်းဆိုပြီး ၀ိုင်းလိမ်ပေးယင်တော့ နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ ထဲက တခါတည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။